Ny Spas tsara indrindra any Cancun
Manintona mpizahatany 3.3 tapitrisa isan-taona, Cancun dia toerana mahafinaritra mpizaha tany any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Meksika ao Yucatan. Ny hotely avo lenta dia feno tsiranoka mirefy 14 kilaometatra, milevina, fasika sandoka antsoina hoe The Hotel Zone, napetraka eo anelanelan'ny Ranomasina Karaiba sy ny Nichupte Lagoon. Ny trano dia tsara tarehy, miaraka amin'ny toeram-pitsaboana sahaza.
Feno tsotra ny fialam-boly: efitrano amoron-drano, mijery ny ranomasin'ny ranomandry, misotro tapakila, misakafo, mandeha amin'ny bar, mahazo fitsaboana amin'ny spa, mitsambikina eo amin'ny jet ski, na mandehandeha eny amoron-dranomasina. Oh! Cancun ihany koa dia manana lalan-kaleha amin'ny golf, haran-dranomasina ho an'ny snorkeling sy fisakafoanana, fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena sy jiro, na afaka mitondra bisy mankany an-tanàna ho an'ny seho an-tsehatra.
Ny atsimon'i Cancun, eo amin'ny Riviera Maya, no faritra manan-danja indrindra ao amin'ny faritra, toy ny Banyan Tree Mayakoba, Belmond Maroma Resort & Spa, ary Grand Velas Riviera Maya. Ny sasany dia Temazcal, trano fandroana nentim-paharazana, ary afaka mandalo ny traikefa amin'ny shaman ao an-toerana ianao.
I Yucatan no foiben'ny firenena Maya, noho izany dia mendrika ny hahafantaranao ny aterineto ao Quintana Rooto ny piramida malaza ao Tulum sy ny sisa tavela amin'ny Maya, ny andian-java-manan'aina sy ny vorona vorona, ireo siramamy masina madio ary ny 500 taona Tanànan'ny tanàna mpanjana-tany Merida.
Ny toerana maotina indrindra (ary indrindra amin'ny nentin-drazana) dia miorina ao an-tanànan'i Cancun any amin'ny tanibe, izay iainan'ny ankamaroan'ny mponina. Ny fizaran-tsakafo dia ny Desambra hatramin'ny Aprily, rehefa feno 80 ny mari-pana ary ambany ny haavony. Mety ho maina mandritra ny fahavaratra izany, izay koa ny rivo-doza.
Amin'ny 43,000 metatra toradroa, io no spa lehibe indrindra ao amin'ny Zone Zone Cancun ary iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny fitsaboana miora amin'ny tany - ary ireo mpitsabo izay manasitrana ny hery fanasitranana vato. Ny serivisy rehetra dia manomboka amin'ny làlam-pifamoivoizana mitentina folo hodi-doha, tarihin'ny "mpitrandraka hydrotherapy." Anisan'izany ny efitrano fandroana aromatherapy, ny orana amin'ny hafanana samihafa sy ny habetsahana, ny efitrano fandroana tanimanga, ny sauna, ny glasy, ny jacuzzi, ny dobo filomanosana, ny dian-tongotra ary ny "dobo fitaratra" feno ranom-boasary isan-karazany. Ny spa dia manoro 90 minitra feno ho an'ity traikefa ity!
Ny spa dia nomena ny vatosoa marobe izay ampiasaina amin'ny fitsaboana azy, ka ao anatin'izany ny kristaly kirarata-pahefana mitaiza ny vatosoa izay mitondra anao any amin'ny Lanitra faha-7; fanasitranana rosiana malaza amin'ny malachita; fantsom-bato manga; Fanafody efatra amin'ny tanana miaraka amin'ny jade, ary ny tarehy Amber sy ny Orinasa mibaribary.
Ny Fomban-drazana Mayan avy amin'ny Tiger-eye Stone dia manomboka amin'ny famafàm-pita (copal dia nampiasain'ny Maya sy Azteks fahiny tamin'ny fombafomba ara-panahy ary fantatra amin'ny famelombelomana ny fanahy.) Avy eo, misy fantsom-panafody manokana ampiasain'ny rebozo, izay " Ny fahendren'ny mpanjaka fahiny "mba hanasitranana ny hozatra mafy.
Gem Spa dia manolotra karazana fanao iraisam-pirenena maromaro, anisan'izany ny balinese, ny masindahy indiana, ary ny massage Hawaiiana antsoina hoe Lumi Juma. Ary ny zaza 5 ka hatramin'ny 15 taona dia afaka mahazo lelam-pahazavana na endrika mani-pofona miaraka amin'ny sôkôla - indigenous toothigo iray hafa any Meksika.
Io olon-dehibe io dia ao amin'ny "Cancun Hotel Zone" ihany no toerana tsara indrindra ho an'ny mpivady izay manalavitra ny ankizy amin'ny efitrano malalaka miaraka amin'ny dobo roa. Nipetaka avy ao anatiny ny tranon'ireo labozia manjelanjelatra maromaro, napetraka ho an'ny mpivady (sy ny namany) ny efitrano fialantsasatra mahafinaritra ao amin'ny spa. Mivelatra ny seza hoditra efatra, eo anelanelan'ny rihana ka hatramin'ny valindrihana fotsy, mba hamoronana tsiambaratelo lehibe kokoa.
Ny fitsaboana tsy maintsy atao dia ny Kukulkan, fombafomba fitsangatsanganana Maya efa natsangany natokana ho an'ny masao izay mikendry ny hanangona anao amin'ny toetoetry ny jaguar (herim-po sy hery), ny voromahery (fahafahana sy fahitana) ary ny bibilava (fanovàna). Ny fitsaboana dia manomboka amin'ny tsora-kazo sy sombin-doko, izay nampifanindran-dalana anao, avy eo nodoranao tamin'ny afo ho mariky ny fanadiovana ary mamela. Mpitsabo mpikaroka roa no miara-miasa aminao, maneho ny fihetseham-pon'ny tsirairay eo am-pihetsiketsika ny fihetsik'ireo biby fanahy telo.
Alohan'ny fitsaboana anao, ankafizo ny sauna, efitrano fandroana ary dobo filomanosana. Ny spa dia misy 19 fitsidihana Le Blanc D'Or, anisan'izany ny tohatra telo amin'ny toeram-pisakafoanana fitsangatsanganana fitsaboana, efitrano fitsangatsanganana dimy, trano sivy tokana, seza iray VIP VIP, ary vishy iray valo, izay ahafahanao manandrana doucha tsara tarehy aorian'ny vatanao fitsaboana. Manana kilasy Yoga sy Pilates azo ampiasaina, miaraka amin'ny toeram-pitsaboana tohanan'ny fanjakana.
Ny toeram-pitsaboana telo ao amin'ny JW Marriott Cancun dia mahafinaritra, ary manasokajy ny fomba nentim-paharazana Maya toy ny Hunab Ku Mayan Massage, izay mampiasa ny fanasitranana aretin-koditra, miaraka amin'ireo teknika hafa. Ny tena tian'ny iray hafa dia ny palapa massage open-air, eo amin'ny moron-dranomasina sandandy. Ny spa ihany koa dia manolotra fampakaram-bady tanora na tarehimarika ho an'ireo 12 ka hatramin'ny 15 taona.
Ny fitsaboana ny vatana rehetra dia voafaritra sy mifangaro amin'ny karazana vovobony vita amin'ny voaniho, siramamy mena, zavamanitra na mangomanga mba hampitony ny masoandro amin'ny fikarakarana ny hoditra. Manana salan'isam-batana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, miaraka amina tobim-pahasalamana miompana amin'ny fofona sy sokatra vaovao: sotro iray mandritra ny fotoana fialantsiny amin'ny fijery amoron-dranomamy avy any amin'ny faritra amoron-dranomasina. Ny trano fonenana sy ny toeram-pitsaboana toeram-pitsaboana no tena ilaina.
Ity toeram-pisakafoanana misy ny fianakaviana rehetra ity dia manana toeram-pisakafoanana ahitana lisitry ny massages iraisam-pirenena, avy amin'ny teny soedoà klasika ka hatramin'ny bamboo, vato mafana ary lomi-lomi. Ny masajy Thai Samunprai dia mampiasa kofehy mafana, kitapo lamba feno harona an-tsokosoko, anisan'izany ny ranom-boasary, rameva, eucalyptus, rosemary ary salady kamboty ary nafanain'ny rano. Ny kitapo dia mifamatotra amin'ny famolavolana mangatsiaka sy ny menaka miaraka amin'ny menaka lavenona mba hanamaivanana ny fihenjanana sy ny fanaintainan'ny ratra.
Raha ao anaty teti-bola ianao dia tazano any amin'ny trano fandraisam-bahiny Xbalamque ao afovoan-tanànan'i Cancun, izay farafaharatsiny ny salan'isa noho ny ao amin'ny Hotel Zone. Ilay spa kely kely be marenina dia manome fitsaboana amin'ny vidiny sarobidy, noho izany dia safidy iray hafa ny mijanona ao amin'ny Hotel Zone fa mahazo fitsaboana eto.
Ny fitsaboana "temazcal" dia tarihin'ny hatsemboham-be Mayan, ary mampiasa fanazarana meditation sy herita ara-pahasalamana hanampiana anao hanimba sy hamelombelona. Ny tolotra hafa dia ny aromatherapy, ny fametahana Shinoa, shiatsu, fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena, ny masaja Thai ary ny watsu, ny famonoana izay atao anaty rano. Ankoatry ny fitsaboana sy ny fitsaboana ao amin'ny vatana dia manome torolàlana momba ny angovo izy, anisan'izany i Reiki, fitsaboana kristaly sy fotoana ao am-pandriana quartz amethyst.
Raha te hivezivezy amin'ny trondro famonoan-trondro ianao amin'ny lisitry ny bokotra spa, dia i Cancun no toerana hanaovana izany. Antsoina hoe ictiotherapy ihany koa io serivisy io, dia manomboka ny asany any Azia fa efa fomba mahazatra ankehitriny ny mandany ny fotoana ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Cancun. Atsofohy amin'ny rano mangatsiaka ny tongotrao ary alaivo an-jatony amin'ny garra rufa an-jatony, karpety karakarao maherin'ny iray ka hatramin'ny roa santimetatra, mivoaka ara-bakiteny ireo sela hoditra maty amin'ny tongotrao. (Tsy manana nify ny karpaty.) Voalaza fa mitebiteby mahafinaritra.
Ao amin'ny Kukulkan Plaza ao afovoan-tanànan'i Cancun, ny Wayan Fish Spa dia manolotra sakafo misongadina izay ahitana safidy momba ny fitsaboana amin'ny tanana, fitsaboana amin'ny tongotra, ary, raha tena matanjaka ianao, dia fitsaboana manontolo miaraka amin'ny trondro 800 mahery.
Miarahaba amin'ny Whale Sharks any Cancun: mampihorohoro, ary faly
Fialam-boly adventure tao Riviera Maya sy Cancun, Meksika
Ny 5 Best Taco Joints any Cancun
Tadiavo ny fampisehoana any amin'ny sekretera Rio Secreto ao amin'ny Riviera Maya
Ahoana no hampitomboana ny voninkazo
Valo amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra any Namibia
CocoWalk, Coconut Grove, Miami - Dining, Shopping, Entertainment ary ny maro hafa!
6 Best Mahabalipuram Resorts by the Beach
Teatra Grika Los Angeles
Toeram-pisakafoanana irlandey sy pubs
Mandeha any Rio? Ny Klioba Morehouse dia manome torohevitra momba ny fahasalamana, toro-hevitra amin'ny Travel
Star Wars Land any Disneyland California
Parks am-bisikileta sy Theme Parks any Kentucky
Sampan-draharahan'ny parisiana sy Carson any Detroit, Michigan
Ny fanavaozana ny fiaramanidina dia soso-kevitra amin'ny fividianana bidanana tokana